सिरहा १ बाट गिरी विजयी र २ मा माओवादीका पूर्व मन्त्री दास विजयी - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 Headline2 सिरहा १ बाट गिरी विजयी र २ मा माओवादीका पूर्व मन्त्री दास विजयी
गोलबजार, २५ मंसिर । सिरहा १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काँगे्रसका प्रभावसाली नेता एवम् राजनीतिक बिश्लेशक प्रदीप गिरी बिजय भएका छन् । नेता गीरीले एमालेका उम्मेदवार गंगा प्रसाद यादवलाई २५ सय ७६ मतको अन्तरले पराजीत गर्दै विजय भएका हुन् ।
गिरीले २३ हजार ९ सय ५१ मत प्रप्त गरेका छन् भने, उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका गंगायालवले २१ हजार ३ सय ७५ मत प्रप्त पाएका छन् । प्रमुख निर्वाचन कार्यालयले गिरिको जितको घाषणा गरेपनि गिरी प्रमाणपत्र बुझ्न पुगेनन् । उनको प्रमाणपत्र पार्टीका प्रतिनिधी सन्तोष कुमार उपाध्यायले बुझेका थिए । गिरी सन्चो नभएका कारण आउन नसकेको उनले जनाए ।
विजयको खवर पाएपछि गरिको आश्रममै पुगेर मतदाता तथा शुभचिन्तकहरुले बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए ।
देशका बाम गठबन्धनको लहर चलीरहेको बेला मधेश आन्दोलन को उद्गास्थ सिरहाको लहान क्षेत्रबाट पहाडी मुलका गीरीको बिजय राजनीतिक रुपमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।
प्रदिप गिरी सिरहाको लहान १४ वस्तिपुरमा २००६ सालमा जन्मेका नेपाली काँग्रेसकाकेन्द्रिय सदस्य तथा चिन्तक प्रदिप गिरी गाउँकै वस्तिपुर माविमा १३ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेर यो क्षेत्रमा चर्चामा रहेका व्यक्ति हुन् । भारतको वनारस स्थित काशि विश्वविद्यालयमा पढ्न जाँदा प्रजातान्त्रिक युवा दलमा प्रवेश गरेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको गिरी सोही दलको २०२४ सालमा उपाध्यक्ष समेत बनेका थिए ।
सोही वर्ष नेपाल आएको बेला पक्राउ परी २ वर्ष जेल विताएको थियो । २०२६ मा जेलबाट छुटे पछि गरी पुनः बनारस पुगेर वि.पी. कोइरालाको सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो । २०३६ मा भएको निर्दल र बहुदलको निर्वाचनमा सिरहामा बहुदलको प्रचारमा लागेको वेला पुनः पक्राउ परेको थियो । त्यस वखत सिरहामा देशकै सवैभन्दा बढी वहुदलको पक्षमा मत खसेको थयो । बहुदलको पक्षमा मत मागेको भन्दै त्यसवेलापनि उहाँ पक्राउ परेको थियो । त्यसपछि पनि २०४२ को सत्याग्र र ०४५ मा जेल परेको गिरी निरन्तर नेपाली काँग्रेसका राजनीतिमा हुन । बहुदल पुनःस्थापना पछि २०५१ सालमा सिरहाको क्षेत्र नं. ५ बा निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछि ०५६ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा नेकपा एमालेका धर्मनाथ साहसंग पराजय भएको थियो । लोकतन्त्र स्थापनापछि ०६४ र ७० को निर्वातनमा गरी समानुपातीक सभासद् भएको थियो ।
पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेशचन्द्र दास यादव सिरहा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र २ बाट निर्वा्चित भएका छन् । वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका यादवले संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार तथा पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहलाई पराजित गरेका हुन् ।निर्वाचित यादवले २० हजार १४८ मत ल्याएर निर्वा्चित भएका छन् । यादव ०४८ र ०५१ मा लगातार सांसद निर्वा्चित भएका थिए ।
उनका निकटम प्रतिस्पर्धी फोरमका सिंहले १७ हजार २६० मत प्राप्त गरे । क्षेत्र नम्बर २ को मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रत्यक्षतर्फ मतगणना सकिएको छ ।